Feysal Xasan Xaashi oo la wareegay hoggaanka gooldhalinta horyaalka Somali Premier League – Gool FM
(Muqdisho) 06 Feb 2020. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Mogadishu City Club Feysal Xasan Xaashi ayaa hoggaanka gooldhalinta horyaalka Somali Premier League la Wareegay, kaddib labadii gool uu ka dhaliyay kooxda Dekedda FC.
Ciyaaryahan Feysal Xasan Xaashi ayaa sanadkan ku jira bandhigii ugu fiicanaa isagoo iminka dhaliyay todobo gool, wuxuuna kooxdiisa u saftay todobo ciyaar taas oo kuu muujinaysa inuu hannaankiisa ciyaareed ee horyaalka Somali Premier League uu aad u wacan yahay kal ciyaareedkan.
Feysal Xasan Xaashi ayaa shalay waxa uu ku durduriyay kooxdiisii hore ee Dekedda, isagoo labo gool oo cajiib ah ka dhaliyay ciyaar ku dhammaatay 5-0 oo ay guusha ku raacday Kooxdiisa Mogadishu City Club.
Xiddigan ayaa kooxda Mogadishu City Club uga soo biiray Dekedda FC sanadkii 2019-kii, wuxuuna iminka ka mid yahay xiddigaha ugu muhiimsan falsafadda Tababare Mohamed Mistir Lamjed.
Laacibkan ayaa ugu dambeysay inuu ku guuleysto gooldhalinta horyaalka Somali Premier League sanad ciyaareedkii 2015-kii, xilligaasoo uu kula guuleystay Kooxda Jeenyo, balse sanadkan waxa uu doonayaa inuu ku guuleysto gooldhalinta horyaalka.
Gooldhalinta horyaalka waxaa sanadkan isku haysta xiddigo dhowr ah, marka laga soo tago Feysal oo 7-gool leh, balse waxaa jira xiddigo ku soo dhow, waxaana ka mid ah saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin Benteke oo leh 6-gool, Mohamed Kyeline oo leh 6-gool, halka xiddigaha kala ay ka hooseeyaan saddexdan ciyaaryahan.